ResponseTap: Smart Match Akangwara Kufona Kuchengeta Attribution | Martech Zone
ResponseTap: Smart Match Akangwara Kufona Kuchengeta Attribution
China, Kurume 8, 2018 Chitatu, Kurume 7, 2018 Douglas Karr
Dana Intelligence chikuva, MhinduroTap, yagadzira chinhu chitsva, Smart Match, iyo inobvumidza vashandisi kuti vaone kukosha chaiko kweiyo yega inbound mutengi kufona uye vanoiisa kune iyo yekushambadzira sosi, kunyangwe pasi kune iro kiyi kiyi.
Kugona kuteedzera inotungamira sosi uye wozopa mari uye margin kukosha kwave kuri budiriro huru kwatiri. Simon Hoe, Global Musoro weDhijitari pa Ngarava 1st
Icho chishandiso chinokurudzira kushandiswa kwedata kukwidzirisa mishandirapamwe kune vese vari-mumba vashambadzi uye ekushambadzira masangano, pamwe nekubvumira vamiririri vane mafoni-centric vatengi kuti vataure pane chaiyo ROI.
Kusvika parizvino, kubatanidza mari yekufona kumabasa ekushambadzira anodikanwa ekutaurirana nemamiririri nemaoko akakosha maitiro mune yakasarudzika sisitimu, kana kushandisa kusangana kune yavo CRM system, iyo yanga isiri nguva dzose yakajeka kana inogoneka.
Smart Match ndicho chikamu chisipo cheiyo puzzle yekuzivisa yevatengesi. Kwete chete iwe unogona kukwidzirisa mishandirapamwe zvichibva nekuti mangani mafonirwo emushandirapamwe wakagadzirwa, asi iwe unogona kugadzirisa maitiro ako zvichienderana nemari kana purofiti inogadzirwa. Zviri nyore kushandisa Smart Match kuti uwane masosi anotyaira yako yepamusoro kukosha kwekutengesa foni. Nick Ashmore, Mutevedzeri weMutungamiriri weKushambadzira paMhinduroTap
Iye zvino vachishandisa Smart Match, vatengesi vanogona, pamwe nekubatanidza zero, vanoti kutengesa kwekufona kune yega yekutengesa yekubata kwakaitika pamberi pekufona.
Fonera Mishumo Yemishumo Inosanganisira:
Kuwana Muongorori Wenyaya - kuoneka kwemishandirapamwe yako yese uye zvekushambadzira munzvimbo imwe. Chinja pakati peMushandirapamwe, Chiteshi kana Wepakati maonero ezvemunoziva mune iro basa rekushambadzira riri kuburitsa mafoni mazhinji, mari uye purofiti.
Attribution Kuenzanisa Chirevo - enzanisa akawanda akapihwa mamodheru anoenderana nezviyero zvakasiyana. Tsvaga kuti huwandu hwekufona sei, mari yekutengesa uye purofiti zvinosiyana kubva kune imwe modhi kuenda kune imwe.
Tora Smart Match Demo
Tags: kushambadzira chinongedzobing ppckufona chinongedzochiteshi kupiwafacebook adsgoogle organicgoogle ppcOrganic kufona chinongedzoinduramutambo wakangwara
MaMabhizimusi Anofanirwa Kuve Achiita Sei Nega Ega Yemagariro Mapuratifomu
SalesRep.ai: Kushandisa Njere Kugadzirisa Multi-Channel Prospect Kukurukurirana